HEARING PROTECTION | Kyee Shwe & Sister | KS&S Myanmar
Failure to recognize industrial noises and loud noises produced from workplaces as workplace hazard has often resulted in hearing losses in the workplace, It is very important to use hearing protective equipment to reduce unnecessary noises and protect the ears.
Headphones, are very useful for hearing. protection and it is convenient to use in the workplace, Since the cost of hearing protective equipment for workers that are regularly exposed t0 noise in the workplace is low, employers should provide hearing protection,
When the workers are using the hearing protective equipment, they need to train and follow specific rules in order to use it correctly.
စက်မှုဆူညံသံများနှင့် အသံများကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်တတ်သော လုပ်ငန်းခွင်များမှ ဆူညံသံများကို လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်အဖြစ် သတိမမူတတ်ကြသဖြင့် ၎င်းဆူညံသံများကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အကြားအာရုံ ဆုံးရှုံးမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ မလိုအပ်သော ဆူညံသံများကို လျှော့ချရန်နှင့် နားကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အကြားအာရုံ ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများ အသုံးပြုရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
အကြားအာရုံ ကာကွယ်ရေးအတွက် နားကြပ်များသည် အလွန်အသုံးဝင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း အဆင်ပြေစေပါသည်။ ဆူညံသံများနှင့် ပုံမှန်ကြုံတွေ့လုပ်ကိုင်နေရသော အလုပ်သမားများအတွက် အကြားအာရုံကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများသည် ကုန်ကျစရိတ်လည်း နည်းပါးသောကြောင့် အလုပ်ရှင်များမှ အကြားအာရုံ ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။
အကြားအာရုံကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသောအခါ ၎င်းတို့ကို မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် လေ့ကျင့်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။